स्वस्थ, स्फूर्ति र ताजापनका लागि जरुरी ६ हर्मोन, कसरी बढाउने ? – सत्य तथ्य र निष्पक्ष्य समाचारको लागि
टेस्टोस्टेरन हर्मोन पुरुष र महिला दुबैमा स्राव हुन्छ । यद्यपि पुरुषमा यसको मात्रा बढी हुनछ । पुरुषमा हुने परिवर्तनका लागि पनि यो हर्मोन जिम्मेवार हुन्छ । टेस्टोस्टेरनलाई सेक्स हर्मोन पनि भनिन्छ, किनभने यसले कामुकता, क्षमता र स्पर्म बढाउँछ । पुरुषमा यस हर्मोनको कमी भएमा उनको यौन जीवन प्रभावित हुन्छ । महिलामा यस हर्मोनको कमी भएमा धेरैजसो अनुहार वा केसमा समस्या देखिन्छ । source
Tags: कसरी बढाउने ? राम्रो मुडको लागि ओएस्ट्रोजन स्फूर्ति र ताजापनका लागि जरुरी ६ हर्मोन स्वस्थ
Previous रोगभन्दा ठूलो सत्रु, स्वास्थ्य भन्दा ठूलो धन केही छैन
Next यी खानेकुरा जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ